नियन्त्रण – Page3– Himalaya Television
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चेतावनी, यस्तो छ विज्ञको सुझाव (भिडियो रिपोर्टसहित)
७ वैशाख २०७८ काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या बढेसँगै विज्ञहरुले स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने आशंका गरेका छन् । पछिल्लो पटक संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेमा युवा र बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । गत वर्ष...
प्रधानमन्त्रीद्वारा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग गर्न आग्रह
४ वैशाख २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस–१९ को समस्याबारे समाधानका लागि सबै दलसँग सहयोगको आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी रहेको सर्वदलीय बैठकमा उहाँले सबैको सहकार्यबाट मात्र कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिने...
२९ चैत २०७७ बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–३ गुठीमा रहेको एक फर्निचर उद्योगमा भीषण आगलागी भएको छ । विराट बोहराले सञ्चालन गरेको सिर्जना फर्निचरमा आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । गए राति २ः०० बजेदेखि शुरु भएको आगलागी...
९ चैत २०७७ काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्ने सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले भारतमा सङ्क्रमण बढिरहेकाले नेपालमा पनि बढ्नसक्ने जोखिमलाई...
बर्ड फ्लु नियन्त्रणका लागि कस्ताे छ सरकारकाे तयारी ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१४ फागुन २०७७ काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामा बागमती र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा बर्डफ्लु देखिएपछि ती ठाउँका पंक्षीजन्य उत्पादन नष्ट गरिएको छ । तैपनि काठमाडौंको तारेकेश्वरमा दोहोरिएर बर्डफ्लू देखिएको छ । बर्ड फ्लु नियन्त्रणका लागि भइरहेको काम कारबाही...
विद्यार्थी कुट्ने प्रअ प्रहरीको नियन्त्रणमा, कारबाहीको माग गर्दे विद्यार्थी आन्दोलित (भिडियो रिपोर्टसहित)
११ फागुन २०७७ कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा शिक्षकको कुटाईबाट घाइते एक विद्यार्थी अस्पताल भर्ना भएकी छन । कुटपिटमा संलग्न कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित बैजनाथ सिद्धनाथ माविका प्रधानध्यापक खड्क सिंह विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । यी नाराजुलुस...
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको साझा उद्देश्य बन्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली
२८ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको साझा उद्देश्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३० औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त देश भनेर चिनाउनुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचार...
बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको सरकारको दाबी (भिडियो रिपोर्टसहित)
१९ माघ २०७७ काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको दाबी गरेको छ । बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टीम’ तयार गरेर सतर्क रुपमा बसेको मन्त्रालयका सहसचिव डा. विमलकुमार निर्मलले बताउनुभयो । सहसचिव...